Malunga ne-Quanzhou waimaoniu Ngenisa kunye noThunyelo lweziThunyelo kumazwe angaphandle Co, Ltd.
Ikhaya > Ngathi >
IQuanz waimaoniu yokuNgenisa kunye nokuThunyelwa kweMpahla kumazwe angaphandle yasekwa ngo-2017.06.02, yinkampani ebanzi edibanisa uyilo, imveliso kunye nentengiso. Ngapha koko nikezela ngemaski ekhuselekileyo nenokuthenjwa yokukhuseleka, iimasks ze-KN95, iimaski zonyango, iimaski zabantwana, imaski yabantu abadala, imaski yaseburhulumenteni, iiglass, iigloves zerabha, iimpahla ezikhuselayo, ithempletha, isibulala-ntsholongwane, isepha yesandla, umatshini wemaski, iindlebe zemaski, ilaphu leMeltblown , ii-swabs zekotoni, iibhola zomqhaphu kunye nezinye izinto zokhuselo.
Ezi mveliso azithengiswa nje kuphela kwizixeko ezikhulu eTshayina, kodwa zithunyelwa nakwamanye amazwe aseYurophu nase Mpuma Yurophu, Southeast Asia, Middle East, South America, North America, Africa nakwamanye amazwe nakwimimandla. Ukwenzela ukongeza ukhuphiswano lweemveliso zethu kwaye zihlale kurhwebo ngakumbi, inkampani yethu ikhawulezisa ukungeniswa kwetekhnoloji entsha, ikhulisa ngamandla iimveliso ezintsha, ngokuqhubekayo iphucula umgangatho wemveliso, kwaye izabalazela ukufikelela kudibaniso olufanelekileyo lokhuseleko kunye nokukhuselwa kwendalo. Intengiso, ejolise kwimarike, esekwe kubuchule, kumthengi kuqala, phambili phambili, kunye nefilosofi yophuhliso eqhelekileyo yoshishini, rhoqo ukuhlola iimarike ezintsha ekhaya nakwamanye amazwe. Sebenzisana ngokunyaniseka nabathengi abatsha nabadala ukukubonelela ngeenkonzo zobungcali ezifanelekileyo.
Ngapha koko nikezela ngemaski ekhuselekileyo nenokuthenjwa yokukhuseleka, iimasks ze-KN95, iimaski zonyango, iimaski zabantwana, imaski yabantu abadala, imaski yaseburhulumenteni, iiglass, iigloves zerabha, iimpahla ezikhuselayo, ithempletha, isibulala-ntsholongwane, isepha yesandla, umatshini wemaski, iindlebe zemaski, ilaphu leMeltblown Iibhola zomqhaphu kunye nezinye izinto zokhuselo.
Oomatshini abazenzekelayo kwimaski
Ezi mveliso azithengiswa nje kuphela kwizixeko ezikhulu eTshayina, kodwa zithunyelwa nakwamanye amazwe aseYurophu nase Mpuma Yurophu, Southeast Asia, Middle East, South America, North America, Africa nakwamanye amazwe nakwimimandla.